Xisbiga S oo doonaysa in shuruudaha lagu adkeeyo iskuulada diiniga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iskuulka Al-Azhar ee ku yaala magaalada Stockholm. sawir: Pontus Lundahl/TT
Xisbiga S oo doonaysa in shuruudaha lagu adkeeyo iskuulada diiniga
Siyaasiyiin heer degmo oo xisbiga (s) ka tirsan oo diidan iskuulada diimaha
La daabacay onsdag 5 april 2017 kl 10.26
Hogaanka xisbiga Sooshal-demoqoraadi-ga ayaa raba in dalkaan Sweden ay ka sii shaqeeyaan iskuulada diimaha ee gaarka loo leeyahay, laakiin koontaroolka lagu hayo la sii adkeeyo in ka badan intii markii hore lagu sameyn jirey.
Sidaas oo ay tahay siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Sooshal-demoqoraadi-ga ee heer degmo ayaa dhaliilsan ama diidan go’aankaas xisbigoodu ka qaatey iskuulada diimaha ee gaarka loo leeyahay.
Daniel Färm oo ka mid ah wakiilada xisbiga Soosha-demoquraadi-ga ee gobolka Stockholm, ayaa isagoo arrinkaan ka hadlaya wuxuu yiri sidan soo socota:
-Arrinkaani waa talaabo dhanka saxda ah loo qaadey balse kuma filna, waayo iskuulada diimaha ee aynu maanta naqaan waa kuwa baaxad weyn oo sii jiri doona. Marka waxaa muhiim ah in casharadooda diimeed ay iskuuladooda ku dhigaan balse aysan noqon kuwa waajibaadka iskuulka ka mid ah sidoo kalana aysan casharadaasi ka mid noqon kuwa loo isticmaalo canshuurta dadweynaha laga qaado , ayuu yiri Daniel Färm oo ka mid ah wakiilada xisbiga Soosha-demoquraadi-ga ee gobolka Stockholm.
Daniel Färm ayaa intaas ku darey iskuulada kitaabka Quraanka iyo Bibal-ka dhigaa ay ardadooda u dhigaan xilliyada habeenkii ama maalmaha fasaxa ah ee sabtida iyo axadda.
Reysal wasaaraha dalkaan Sweden Stefan Löfven ayaa maalintii shaley sheegey in koontaroolka ay ku adkeyn doonaan iskuulada diimaha ee gaarka loo leeyahay.
Wasiirka waxbarashada Gustav Fridolin iyo Anna Ekström oo ah wasiirka dugsiyada sare ayaa loo xilsaarey in ay la xiriiraan hey’adda dugsiyada (Skolverket) iyo waliba hey’adda kormeerka dugsiyada si ay u darsaan talaabooyinka arrinkaas laga qaadi karo.